Mpanamboatra sy mpamatsy Fuse Cylindrical China | Mersen
Ireto mpihazona fuse ireto dia mpanohana ny fuse manana habe hatramin'ny 22 58mm, avy eo afaka miasa ambanin'ny hafanana ateraky ny lt dia afaka miasa ihany koa ho toy ny fuse disconnecting switch amin'ny fangaro maromaro. Misy tsipika roa miditra / mivoaka ao amin'ny fuse RT18N, manome fihenan'ny herinaratra. Ny karazana RT18L dia manana hidim-piarovana amin'ny fuse carrier rehefa tapaka mba hisorohana ny fandidiana diso, azo ampitaina ihany koa amin'ny tondro iray, izay mandeha rehefa tapaka ny rohy fuse. Volavola insulate voamarina hatramin'ny 690V, Frequote d'exploitation 50Hz AC, fantsom-panafanan'ny rivotra tsy miankina mahazatra hatramin'ny 125A; Mifanaraka amin'ny GB13539.1 GB / T13539.2 sy IEC60269-1 IEC60269-2.
Rehefa vita ny tranga misy tsindrona plastika miaraka amin'ny fifandraisana sy ny rohy fuse, ny fotony dia miforona amin'ny alàlan'ny welding na riveting izay samy afaka voarafitra amina dingana maro. FB15C, FB16-3J, FB19C-3J, Rt19 dia firafitra misokatra, ary ny hafa dia rafitra miorina amin'ny simiconcealed. Misy haben'ny fuse dimy azo isafidianana amin'ny fuse mitovy amin'ny RT18N, RT18B ary RT18C, misy andalana roa miditra ho an'ny RT18N. Ny iray dia apetraka miaraka amin'ny rohy fiangonan'ny fuse mitovy habe aminy. Ny iray hafa dia fifandraisana misokatra maharitra miaraka amina teboka roa. Ny singa fototra rehetra dia afaka manapaka ny herinaratra. Ny toby Rt18 dia napetraka avokoa ny lalamby DIN, izay anisany ny RT18L miaraka amin'ny hidy fiarovana hiadiana amin'ny asa ratsy ao amin'ny fanjakana mamaky.
Ireo maodely, naoty voasokajy, naoty misy ankehitriny, na refy dia aseho amin'ny sary 9.1 ~ 9.14 sy ny tabilao 9 Ny sakany amin'ny fangaro N-phase ao amin'ny Bn = nB.
Teo aloha: Fiara mandeha amin'ny fiara
Manaraka: Rohy fisamborana mifandray amin'ny bolt
Fuse amin'ny Fuse Holder